Halkan waxaa ah 10 Dariiqo oo aad ku Kordhin karto kaqeybgalka Muuqaalka Muuqaalka | Martech Zone
Halkan waxaa ah 10 Dariiqo oo aad ku Kordhin karto kaqeybgalka Muuqaalka Muuqaalka
Monday, June 28, 2021 Arbacada, Oktoobar 13, 2021 Douglas Karr
Istaraatiijiyad muhiim ah oo ku saabsan dib-u-habeynta iyo isdhexgalka bulshada ayaa diiradda saarey nuxurka muuqaalka. Wadaagista faahfaahinta tayada ee bartayada ayaa cirka isku shareertay gaaritaankeenna waxayna ii oggolaaneysaa inaan ugala hadlo waxyaabaha ku jira qayb kasta. Faahfaahintan ka timid Canva ma ahan mid ka duwan - ku socoshada qof iyada oo loo marayo dhammaan siyaabaha kala duwan ee aad u sameysan karto muuqaal muuqaal ah. Oo runtii waan ku faraxsanahay qayb muhiim ah oo talo ah oo ay bixiyaan:
Muuqaalka muuqaalka ah wuxuu ku siinayaa xukun bilaash ah si aad u habeysid fariintaada, u isticmaal farsamooyin iyo dhexdhexaadinno kala duwan si aad farriintaada u gaarsiiso, runtii waa qalab aan dhammaad lahayn oo waxtar leh.
Kala duwanaanshuhu waa furaha khadka tooska ah. Markaan qormooyin maqaal ah qoreyno, waa inaan si aad ah uga shaqeynaa sidii aan uga duwanaan laheyn kumanaanka maqaalo kale ee maalin walba lagu daabaco webka. Ku dar hal muuqaal oo muhiim ah, in kastoo, maqaalkuna wuxuu ku qaadanayaa aragti cusub gabi ahaanba martidaada. Intaas oo keliya maahan, ee wadaagid ee qodobkaasi wuxuu si xad dhaaf ah u kordhayaa.
Ingraphicgraphic this, Canva ayaa ku tusaya 10 Noocyada Muuqaalka Muuqaalka Cajiibka ah sumaddaadu waa inay abuurtaa hadda:
Sawirro Indho-qabasho ah - 93% iibsadayaashu waxay yiraahdaan sawirradu waa # 1 qodobka go'aaminta marka aad iibsaneyso alaabada.
Dhiirrigelinta Kaararka Quote - Xigashooyinku waxay ka tarjumayaan qiimahaaga, way fududahay in la abuuro, waana wax lala wadaagi karo.
Baaqyada adag ee waxqabadka - 70% ganacsiyada waxaa ka maqan wicitaan ficil in kastoo daawadayaashu ay aad ugu dhowdahay inay ficil qaadaan.
Sawirro sumadaysan - Isticmaalidda sawirro faahfaahsan oo summad leh ayaa kaa caawin kara inaad kasbato 67% dhegeysi dheeri ah.
Muuqaalka Xogta Xiisaha Leh - 40% dadku waxay ka jawaabaan oo fahmaan macluumaadka muuqaalka ka fiican qoraalka cad.
Ku mashquulinta Fiidiyowyada - Kaliya 9% ganacsiyada yaryar ayaa adeegsada, laakiin 64% macaamiisha ayaa aad ugu janjeera inay iibsadaan ka dib markay daawadaan fiidiyoow.
Talooyin, Tabaha, iyo Sida loo sameeyo - Waxay siisaa qiime iyo adeegsiga badeecadaada waxayna ka caawisaa sidii loo dhisi lahaa awood.
Screenshots macluumaad - 88% dadku waxay akhriyaan faallooyinka si loo go'aamiyo tayada ganacsiga, qaado shaashadda dib u eegistaada!
Su'aalo Dhalinaya Fikir - Waxay dhiirrigelisaa wadaagista, wada hadalka, ka qayb qaadashada iyo ka warqabka sumadda.
Infographics - Sabab baa jirta sababta Highbridge waxay soo saartaa macluumaad aad u tiro badan macaamiishayada! Waxay 3 jeer ka badan yihiin in lala wadaago oo ganacsiyada isticmaalaya infographics-ka ayaa sheegaya 12% faa'iido ka badan kuwa aan samayn.
Shaacinta: Anigu waxaan ku xirnahay Canva oo waxaan u adeegsanayaa xiriirinteyda ku xiran maqaalkan.
Tags: sawirro summadaysancanugafiidiyowyo xiiso lehsida looinfographicsawir qaadayaashasawiradasawirosu'aalokaararka xigashadasawiradatricksnoocyada muuqaalka muuqaalka ahvideosmuuqaal muuqaal ah
Sep 14, 2017 at 6: 56 AM
Maqaal wanaagsan iyo faahfaahin muuqaal ah. Waxyaabaha Muuqaalka ah iyo daabacaadda ayaa wax badan u saameeya si ay ugu gudbiyaan fariinteenna ganacsi kuwa kale.